Umlando wakwa Nzuza – iAfrika
Umlando wakwa Nzuza
12 thoughts on “Umlando wakwa Nzuza”
Special thanks for giving us such an awesome amazing knowledge about our clan
Thank you, please continue visit our website.
sibonge kakhulu boMshazi amahle
Siyabonga indlela umlando wakwaNzuza ohumushwe ngayo. Mina nginzalo yesizukulwane sasaNsingweni kaNondumo, inkosi uMtungafi Themba Nzuza esanda’khothama biwu’malume wami kanti biphinde ithi sbari kubaba ongizalayo, nobaba naye bethi sbari kuyona ngendlovukazi yokqala engudade kubaba. Kuyancomeka ngomlando wakwaNzuza noma kukhona lana okuphambana khona kancane nalana okugejana khona kancane nje. Muhle umsebenzi wale blog, niqhubeke njalo ngemisebenzi yenu emihle evusa ulwazi lwesintu.
Siyabonga kakhulu ngezincomo Mshazi, isandla sedlula ikhanda.
Ngaze ngajabula ukuzwa ngomlando wesibongo sami U Nzuza , oMshazi oSokhela Simhlophe oNongweni ♥️ ngingomunye ozigqajayo ngesibongo sami Nzuza